JABUUTI - Dowladda Itoobiya ayaa saami dhaqaale laga siiyay Dekedda Doroolle ee dalka Jabuuti, oo muhiim u ah marinkeeda Ganacsiga kadib heshiis cusub oo ay kala saxiixdeen labada dowaladood.
Wakaaladda wararka Itoobiya [Ethiopian News Agency], ayaa baahisay in heshiiska uu yimid kadib booqasho labo maalmood oo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ku tagey dalka Jabuuti.
Heshiiskan cusub ayaa u ogolaanaya Shirkadaha Ganacsiga Itoobiya inay maalgashi ku sameystaan Dekedda Kunteenarada Doraalle, oo horey gacanta ugu haysay Shirkadda DP World balse laga qaadey markii ay is-khilaafeen dowladda Jabuuti.
Dowladda Dubai oo leh Shirkadda DP World ayaa kahor timid go'aankii Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uga baxay heshiiska uu uga baxay, waxayna dacwad u gudbisay Maxkamad caalami ah. Halkan ka akhri.
Jabuuti ayaa wixii markaasi ka dambeeyay raadinaysay maalgashi dibadda ah, maadaama Dekeddu ay tahay isheeda dhaqaalaha ugu weyn, iyadoo dalkaasi ku yaalla badda Cas ay saldhigyo military ku leeyihiin Mareykanka, Faransiiska, Japan iyo China.
Ma cadda wali qiimaha saamiga dhaqaalah ee Itoobiya ku yeelanayso Dekedda Doraalle.
"Gudi isku-dhaf ah oo Heer Wasiirro ah ayaa kulan ka yeelan doono dhamasytirka Heshiiska, kaasi oo ka shaqeyn hergelinta Mashruuc iyo saamiga dhaqaale ee Itoobiya," ayuu yiri Sarkaal katirsan dowladda Itoobiya oo la hadlay ENA.
Dekedda Jabuuti ayaa laga soo dejiyaa 95% Ganacsiga caalamka uga yimaada Itoobiya, oo ah dalka labaad ee ugu shacabka badan Africa, sidoo kalena ah midka ugu dhaqaalaha badan Geeska Africa.
Dowladda Itoobiya ayaa saami gaaraya 19% ku leh Dekedda Berbera ee maamulka Somaliland, kadib heshiis saddex geesood ah oo horaantii sanadkan Dubia ku wada saxiixdeen DP World, Somaliland iyo Itoobiya.
DP World helaysa 51% dhaqaalah kasoo xarooda Dekedda Berbera, iyadoo inta hartay ee 30% ay Somaliland leedahay.
Shirkadaha laga leeyahay Itoobiya ee Malagashiga ku sameysan doono Jabuuti waxaa kamid ah Shirkadda Korontada iyo Isgaarsiinta [Ethiopian Electric Power and Ethio Telecom].
Heshiiskan ayaa yimid xilli dhawaan Itoobiya saami laga siiyay Dekedda Berbera...
Jabuuti oo martigelineysa saldhiga cusub ee ciidamada badda Itoobiya
Afrika 03.12.2019. 12:21
Xoghayihii uu Abiy u magacaabay ururka IGAD oo xafiiska la wareegay
Afrika 08.11.2019. 10:46
Magacaabidii Abiy ee xoghayaha fulinta IGAD oo aan dhaqan-gelin
Afrika 01.11.2019. 17:15
Ujeedka safarka ra'iisul wasaare Abiy Axmed Cali ee dalka Jabuuti
Afrika 20.10.2019. 08:15
Afrika 08.09.2018. 16:44